मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिमान–सम्मान खोज्ने र खुसी हुने अधिकारका पक्षमा
कन्टिर–बाबू कहिलेकाहीँ सोच्छन्– नेपाल यहाँको संविधानअनुसार बहुलवादमा विश्वास गर्ने देश हो । यो देश बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक भएको कुरा सिद्धान्ततः सबै स्वीकार गर्छन् तर व्यवहारमा यो मान्यता सर्वस्वीकृत छैन । किन होला ?
कन्टिर–बाबूले उल्लिखित प्रश्नको उत्तर खोजेको निकै भयो तर उपरी आरोप–प्रत्यारोेप र सतही खण्डनबाहेक चित्तबुझ्दो जबाफ भेट्न सकेका छैनन् ।
कन्टिर–बाबू सिद्धान्ततः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अवधारणाका अनुयायी हुन् । मान–सम्मान खोज्ने र खुसी हुने अधिकार सबैलाई छ । तर कुनै पनि नाममा यसमा अवरोध सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई अनुचित मान्नुपर्ने हुन्छ ।
कन्टिर–बाबूको स्पष्ट मत छ– म पनि अरूलाई सम्मान गर्छु, मलाई पनि अरूले सम्मान गरून् । तर सामुन्नेको व्यक्तिले जब कुनै खास जात, भाषा र संस्कृतिका नाम वा आधारमा आफूलाई विशिष्ट र खास ठान्छ भने त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
सिकाइ र बुझाइमा फराकिलोपना ल्याउन मातृभाषाको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो कन्टिर–बाबूले मात्र होइन सारा विश्वले स्वीकार गरेको तथ्य हो । तर यस तथ्यलाई नेपाल समग्रले स्वीकार गर्न किन गाह्रो मानिरहेको छ ?
नेपालमा पनि कुनै न कुनै तरिकाले कथित ‘उच्चता’को यस्तो बोधबाट केही व्यक्ति र समुदाय पीडित छन् । कन्टिर–बाबूलाई त्यसबेला बडो आश्चर्य लाग्छ, जब नेपालीभन्दा बाहेकका भाषा–संस्कृतिको अधिकार र सम्मानको कुरा गर्दा केही व्यक्तिले सहज रूपमा स्वीकार गर्दैनन् । अनेकथरिबाट अनेकथरि पाठ पढाउने प्रयास हुन थाल्छ । तिनीहरू जब कन्टिर–बाबूलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको अर्थ सिकाउन थाल्छन् । कन्टिर–बाबूलाई बहुत हाँसो उठ्छ ।
ए बाबा, नेपाली राष्ट्रिय भाषा हो यसमा त विवादै छैन नि ! कन्टिर–बाबूहरूले यो तथ्य स्वीकार गरेकै छन् । नेपाली भाषाप्रति सादर सम्मान व्यक्त गरेकै छन् । तर कसैले अन्य भाषाको कुरा गर्दा नेपालीको विरोध गरेको अर्थमा बुझिदिनु भएन नि !
सिकाइ र बुझाइमा फराकिलोपना ल्याउन मातृभाषाको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो कन्टिर–बाबूले मात्र होइन सारा विश्वले स्वीकार गरेको तथ्य हो । तर यस तथ्यलाई नेपाल समग्रले स्वीकार गर्न किन गाह्रो मानिरहेको छ ? कन्टिर–बाबूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रतिस्पर्धाको जमाना छ, ठिक छ, त्यो कुरा सबैले चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ । तर प्रतिस्पर्धाको सवालमा कन्टिर–बाबूको प्रश्न छ– एउटा गैरनेपालीभाषीले नेपाली भाषाका माध्यमबाट सनातन नेपालीभाषीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?
अधिकार कन्टिर मान–सम्मान